> Resource > Video > Divx magaabay: Sida loo jar Divx Files qabad fiican
Ma doonaysaa software ah si ay u dhinto filimada Divx? Sii Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) isku day ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad jaray ee wax dhibic gaar ah, oo badbaadiyo qayb kasta oo aad rabto. Sidaa daraadeed, waxaad yeelan doontaa in ay jar file a Divx weyn dhowr video qaybaha la video tayada cajiib ah. Plus, taas xirfad software goynta video sidoo kale kuu ogolaanaya in aad ku eegaan file video hor iyo ka dib jarida ay ciyaaryahanka gundhig u awood badan. Haddii aad socda Mac ah, oo kaliya la qaato Divx magaabay u Mac: Wondershare Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) si ay si fiican u sameeyaan. Hoos waxaa ku qoran warbixin ku qeexi doonaa sida loo sameeyo waa talaabo talaabo ah.
1 dar files Divx in this magaabay Divx
Ka dib markii download iyo rakibi this magaabay Divx, kaliya ka dhacay "Import" badhanka si falgali folder file iyo dajiyaan file Divx aad rabto inaad ka gooyay. Sidoo kale, aad si fudud u soo jiidi kartaa jeedi file Divx aad si toos ah u furmo suuqa barnaamijka. Dhammaan files keeno tusi doonaa sida thumbnails in Album ah. Ka dib markii in, jiidi file Divx si aad u waqtiga video iyo aad u hesho waxa ay diyaar u jaro.
2 qayb kasta oo ka go'een file Divx aad
Si aad u jaray meel kasta oo file Divx aad (bilowga, middel, dhammaadka) ka, fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran.
Dhaqaaq cas Time Tusiyaha meeshii aad rabto in aad ka gooyay.
Riix icon maqas-sida ee bar qalab si ay u kala qaybsan tahay.
Isla markiiba, video Divx waxaa loo kala qeybin doonaa laba qaybood. Waxaad tirtiri kartaa qayb ka mid ah aadan u baahnayn.
Haddii aad rabto in aad la gooyaa qayb dhexe video Divx ah, fadlan ku soo celiyaan tallaabo 1 & 2 in aan kala tagno file Divx aad dhowr qaybaha hore. Markaasuu ku dhufatey "Delete" badhanka si meesha looga saaro in aad ka qayb aan la rabin.
Talooyin : Si aad si fudud u heli booska sax ah, waxaad ka ciyaari kartaa video shaashadda xaq iyo jiidi bar horumarka meeshii xaq, ka dibna riix stop. Goorsheegta ayaa si toos ah u dhaqaaqi doonto barta saxda ah si waafaqsan.
3 dhoofinta gooyay files Divx
Hadda aad uga takhalusi clips rabin, fadlan riix "Abuur" button inay u dhoofiyaan aad divx cut video. In uu furmo suuqa wax soo saarka, waxaad dooran kartaa AVI ama MOV video ah oo ka hooseeya "Qaabka" tab, ka dibna sheeg Divx sida encoder video in goobaha sare ee. Haddii kale, haddii aad rabto in aad ka ciyaari faylka abuureen iPhone, iPad, iPod, Samsung Galaxy note, iwm kaliya soo qaado tusaale sax ah oo ka hooseeya "Device" tab.
Markii wax walba waa ok, ku dhacay oo keliya Abuur inay u dhoofiyaan file cusub Divx. Marka uu dhamaado, waxaad si fudud u heli doontaa faylka abuuray sida ay jidka soo saarka aad u dhigay.
Fiiri hoos video tutorial ku saabsan sida loo gooyay files Divx talaabo talaabo ah:
Fiiro gaar ah: Barnaamijkan dhoofin karaan oo keliya mid ka mid file hal mar. Sidaas darteed haddii aad rabto in aad hesho dhowr qaybaha, waxaad u baahan tahay inay u dhoofiyaan dhowr jeer.